जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Namaste Host
June 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २९ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ जुन १२ तारीख जेठ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी आद्रा नक्षत्र गण्ड योग पश्चात वृद्धि योग कौलव करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा मु’द्गर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु ,बालश्रमविरुद्ध दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
राशि नक्षत्रहरूको एउटा घे’रा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रह आकाशमा पारगमन गर्छन । ज्योतिषहरूले यि नक्षत्रहरू माथि ध्यान दिए र यिनलाई केही विशिष्ट महत्त्व दिए । समय संग-संगै उनीहरूले बारहौं नक्षत्रहरूको विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसमा आधारित बारह राशिहरूको एक प्रणाली बनाए ।
राशीहरू मूलतः काल्पनिक तारापुञ्जहरू हुन् । सूर्यले पृथ्वीको वरिपरि ब्रह्माण्डमा घुम्ने बाटो वृत्त (वास्तवमा केही दीर्घवृत्त) ३६० डिग्रीको हुन्छ । यसलाई १२ भागमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक ३०/३० डिग्रीको। यो ३० डिग्रीभित्र जुन नामको तारापुञ्ज पर्दछ, त्यो राशी भनेर जानिन्छ।
यी राशीहरू हुन् – मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मिन। एकमा मेष र एवम् क्रमले बाह्रमा मिन। यिनीहरूले मोटामोटी रूपमा यिनै शब्दहरूले सङ्केत गरेका तारापुञ्जको आकारलाई निर्देशित गरेका हुन्छन् – मेषको मतलब भेँडा, वृषको मतलब साँढे आदि। अनि त्यस्तै ग्रहहरू भए सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मङ्गल, वृहस्पति र शनी – जम्मा सात। यीबाहेक पूर्वीय ज्योतिषमा दुईवटा काल्पनिक ग्रहहरू राहु र केतुलाई पनि छन्। यिनीहरू वास्तवमा चन्द्र कक्ष र सूर्य कक्ष काटिएका विन्दुहरू हुन्, भौतिक ग्रहहरू होइनन्। त्यसैले जहिले पनि यिनीहरू परस्पर विपरित दिशामा रहेका हुन्छन्।
ज्योतिषशास्त्रले राशी र ग्रहहरूको नैसर्गिक सम्बन्ध रहेको मान्दछ। राशीसँग नैसर्गिक सम्बन्ध रहेको ग्रहलाई त्यो राशीको स्वामी भन्ने गरिन्छ – मेष-मङ्गल, वृष-शुक्र, मिथुन-बुध, कर्कट-चन्द्र, सिंह-सूर्य, कन्या-बुध, तुला-शुक्र, वृश्चिक-मङ्गल, धनु-वृहस्पति, मकर-शनी, कुम्भ-शनी, मिन-वृहस्पति। राशी स्थिर रहन्छ। ग्रहहरू गतिशील। कुनै खास समयमा ग्रहहरू आफ्नो भ्रमणको क्रममा कुन राशीमा पुगेका हुन्छन्, त्यही आधारमा कुण्डली निर्धारण हुन्छ।
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा क’डा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बा’धा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झ’न्जट सहनु पर्ला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम खर्चीनुपर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मा’नसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चो ट प टकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको द’बाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा ख’टप’ट उत्पन्न हुनेछ । अधीक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । सा’मुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा ख’टप’ट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्यक्षेत्र सहज बन्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा का’ट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर रहनेछन । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । ज’टिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । सफल कार्यसम्पादनको लागी क’डा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । भौ’तिक श्रो’तसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मान्यजनको स्वास्थ्यमा न’कारा’त्मक असरले मनमा खि’न्नता छाउनेछ । कार्यमा बिश्लेषणको अभावले पारिवारिक सम्बन्धमा बै’मन’श्यता उत्पन्न हुनेछ । अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले ष’ड्यन्त्रमा फ’सीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन । साजेदारी कार्यमा हा’त न’हालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य स’म्बन्धमा सामान्य ख’टप’ट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चि’न्ताले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको ग’ढब’ढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झ’न्झ’ट उ’त्पन्न गराउला ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) सामान्य क्ष’ती ब्य’र्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सा’मना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बा’धा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि स’मस्याको कारण मनमा सामान्य चि’न्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रु’टिले अ’पज’सको सा’मना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
कुनैदिन चम्चमाउदो तारा बनेकी निशा घिमिरे अहिले जिबन र मृत्युको दोसादमा , उनै निशाले पहिला यस्तो दमदार अभिनय र डान्स गर्थिन, हेर्नुहोस (भिडियो)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, चैत्र २४ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, माघ १७ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
January 29, 2021 January 29, 2021 Bijay Lama
कल्पना सम्म पनि गर्न नसके घटना नेपालमै घट्यो – प्रयोग गर्दै गरेको ब्रस एक्कासि निलेपछि…… June 15, 2021
तेस्रो लहरको संक्रमणले बालबालिका बढी जोखिममा, विज्ञले दिए यस्तो चेतावोनी June 15, 2021
लगातारको वर्षाले कुन-कुन नदिमा बढ्यो पानी, कहाँ छ खतरा ? यस्तो छ २४ घण्टे चेतावनी June 15, 2021
अब एसइईको मूल्यांकनमा ८० नम्बरभन्दा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने June 15, 2021
बेलायतमा अर्को भाइरस भेटियो : के हो मन्कीपक्स ? कस्तो हुन्छ र यो कति खतरनाक ? June 15, 2021